London: Dad Masaajid ka soo Baxay oo Gaari La Jiirsiiyay | RBC Radio
London: Dad Masaajid ka soo Baxay oo Gaari La Jiirsiiyay
Muqdisho (RBC Radio) Dhimashada hal qof oo rag ah iyo dhaawaca siddeed kale ayaa la xaqiijiyay markii uu gaari dul maray dad ku sugnaa hareeraha wado ka agdhaw masaajid ku yaalla waqooyiga magaalada London.
Booliska magaalada London ayaa sheegay in dadka dhacdadaan ku waxyeeloobay la aaminsanyahay inay kasoo laabteen salaada tahajudka.Waxaana lugu dilmaamay dhacdadaan shil aad u weyn,sida ay saraakiisha booliska sheegen.
Waxaa kalo ay boolisku sheegeen in ay gacanta ku hayaan ninki wadey gaarigan Vanka ah oo ay horistaageen inuu baxsado dadkii masaajidka ka soo baxay ee goobta joogey, kuwaasoo markii dambana u dhiibey booliska.
Guddiga Muslimiinta ee Britain war ka soo baxay waxaa lugu sheegay in gaari si qasad ah loo jiirsiiyay dad cibaadeysanayay.Wuxuuna shilkan ka dhacay agagaarka masaajidka degmada Finsbury Park ee waqooyiga magaalada London.
Baraha bulshada iyo warbaahinta ayaa lugu baahiyay muuqaal dhacdada kadib muujinaya argagaxa goobtaasi ka dhacay iyadoo dadka halkaasi ku dhawacmayna loo gurmaday.Waxaana shilkan la wargeliyay ra’iisul wasaaraha Britain Theresa May.